Wikipedia:Takelaka/Tahiry 2012 - Wikipedia
Ny mpanjaka Andriandranandobe, (niaina tamin'ny taonjato faha-16 aorian'ny jesosy kristy) no razambe nipoiran'ny terak'Andriandranando, atao koa hoe "zanadranando". Avy amin'ny faritry ny ala antsinanana izy no niakatra taty Imerina ankehitrio izy mba hitady zara-tany hanjakana. Zanak'i ny mpanjaka Andriamamilazabe sy Andrianetohento izy. Metisy maley sy arabo i Andriandranandobe. Raha tonga teto anefa dia efa natanjaka ny fanjakan'Andriamanelo teo Alasora sy ny fanjakan-dRabiby teo Ambohidrabiby. (tohiny...)
Ralambo (1575-1610), no namorona ny teny hoe Imerina-Ambaniandro teo Ambohidrabiby, izay renivohim-panjakany.
Roa amby roapolo km miala an'Antananarivo amin'ny làlana mankany Anjozorobe no misy an'Ambohidrabiby, vohitra miorina eo antampon-tendrombohitra efa hatramin'ny taonjato faha-16.
Teo Ambohidrabiby no namorona sy nametraka soatoavina maro i Ralambo sy ny Andriandoriamanjaka, mpanolotsainy, koa isan'izany ny anarana hoe " IMERINA-AMBANIANDRO".
Raha sendra nitaninandro teo ambony vato eo ambony atsimo ivelankady amin'ny vohitr'Ambohidrabiby hono i Ralambo ka nanao fanorona tamin'Andriandoriamanjaka iray mpanolotsainy dia nangingina tsy nahitanteny be ihany izy. (tohiny...)
Ny vazimba dia anarana niantsoana ireo mponina nonina taty anivon'i madagasikara ( taty Imerina sy Betsileo, bara, anjozorobe) talohan'ny nanjakan'i Rabiby sy Andriamanelo (taonjato faha-16 ap JC). Rabiby, mpanjaka arabo, sy Andriamanelo, mpanjaka maley mantsy no navahan'ny lovantsofina fa arabo sy maley ary ireo olomainty mpanompony no angaralahy,fa ireo sisa efa nonina taty anivontany tamin'izany dia vazimba. Ary i Rabiby no nanenjika voalohany ny vazimba sy nanosika azy handositra. (tohiny...)
Ny endri-tsoratra voalohany indrindra fantatra amin'izao tontolo izao dia endri-tsoratra hieroglifika hita tany Abydos (400 km miala ao Le Caire) eo amina vilany tany hita tanaty fasam-panjaka taloha. tamin'ny taona -3400 ireo soratra ireo no nosoratana. Taona maromaro taty aoriana, mipoita ny soratra miendrika fantsika an'ny Fanjakambe Someriana, tamin'ny taona -3300 teo ho eo.
Ny fanoratana, hoy i Wells, dia fahafahana "mametraka fifanekena, lalàna ary ny didy. (tohiny...)
Ny lôgôgrama dia soratra iray maneho hevitra na zavatra iray. Betsaka ny lôgôgrama ilaina rehefa handika an-tsoratra fiteny iray, ary ny olana lehibe amin'ny soratra lôgôgrafika dia ny fianarana azy mandritry ny taona maro dia maro. (tohiny...)
Rabiby (voalohan'ny taonjato faha-16 aorian'i Kristy), mpanjaka arabo jiosy teo Ambohidrabiby dia nanan-janaka telo ka ny vavimatoa dia i Rabefaravolamanjaka ary ny vavy aivo dia i Ramaintsoanala (niova anarana ho Randapavola). Nisy vady namboarina roa teo Ambohidrabiby tamin'ny nanjakan-dRabiby. Raha tonga hangataka an'i Rabefaravolamanjaka i Andriamanelo mpanjakan'Alasora dia i Randapavola no nomen-dRabiby ho vadiny fa Rabefaravolamanjaka kosa nomeny ho vadin'Andrianamboninolona, zanak'Andriamananitany. Ny Andriandoriamanjaka dia iantsoana ireo zanak'i Rabefaravolamanjaka tamin'Andrianamboninolona zanak'Andriamananitany. Ao antampon'ilay tendrombohitra avo voahodidina hadivory eroa ampita avaratra antsinanan'Ambohidrabiby, atao hoe "Ambohitrandriananahary", no namponenin-dRabiby i Rabefaravolamanjaka sy ireo zanany ary ao Rabefaravolamanjaka no miafina. Vadiben'Andrianamboninolona i Rabefaravolamanjaka ka matetika Andrianamboninolona no mipetraka maharitra eo amin'i Rabefaravolamanjaka ka nahavery ny anaran'io tendrombohitra io ho "Ambohitrandriananahary", anarana nalain'Andrianamboninolona tamin' "Ambohitrandriananahary", vohitr'Andriamananitany rainy eo ampita avaratr'Alasora. Nisy fotoana narary mafy ny mpanjaka Rabiby teo Ambohidrabiby ary naika maty mihintsy nefa dia tsy norahirahian'ireo zanany izy. Fa ireo zanak'i Rabefaravolamanjaka no nikarakara sy nahasitrana azy. Koa rehefa sitrana i Rabiby dia hoy ny teniny mantsy ireo zanak'i Rabefaravolamanjaka ireo: " Tsy mba zafiko ianareo fa toy ny zanako naterako, fa ny zanako tsy nahavita izay vitanareo". (tohiny...)
Ny hasina dia manana heviny efatra loha teo amin'ny Ntaolo:
1)Hery tsy hita maso ny hasina ka ireo andriana, mpanandro, mpisikidy,sy ireo zavaboaharin'andriamanitra toy ny zazavavindrano, kalanoro, vazimba, ireo sampy, sns...izay afaka manova ny fiainan'ny olombelona no heverin'ny ntaolo ho manana azy. Marihina fa ny loharanon'io hery io dia Andriamanitra andriananahary sy ny razana. Araka ny lovantsofina teo amin'ny andriana anefa, ny hasina amin'ny andriana dia avy amin'ny zanak'andriamanitra mihintsy fa tsy toy ireo hasina hita amin'ny zava-boahary hafa.Raha nidina nilalao tety ambony tany ny zanak'Andriamanitra dia tsy tafody tany andanitra intsony satria voaota fadin'ny olombelona. Koa tonga nitoetra sy notompoin'ny olombelona teto antany ilay zanak'andriamanitra. (tohiny...)
I Christophe Colomb (teraka anelanelan'ny 25 Aogositra sy ny 31 Oktobra 1451 tany Zena - Maty tamin'ny 20 Mey 1506, tany Valladolid, Espaina) dia olona voalohany indrindra tamin'ny Tantara niampita ny Ranomasimbe Atlantika amin'ny alalan'ny fahitana lalana vaovao mandeha-miverina anelanelan'ny kaontinanta Amerikana (noheveriny fa ny India) sy ny Eoropa.
Ny endri-tsoratra voalohany indrindra fantatra amin'izao tontolo izao dia endri-tsoratra hieroglifika hita tany Abydos (400 km miala ao Le Caire) eo amina vilany tany hita tanaty fasam-panjaka taloha. tamin'ny taona -3400 ireo soratra ireo no nosoratana. Taona maromaro taty aoriana, mipoita ny soratra miendrika fantsika ny Fanjakambe Someriana, tamin'ny taona -3300 teo ho eo.
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Wikipedia:Takelaka/Tahiry_2012&oldid=256036"
Voaova farany tamin'ny 10 Oktobra 2011 amin'ny 17:50 ity pejy ity.